केही मिनेटमै अनुहार गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी मध्ये कुनै एक उपाय प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस् – Khabaarpati
January 10, 2021 January 10, 2021 goodmamLeaveaComment on केही मिनेटमै अनुहार गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी मध्ये कुनै एक उपाय प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस्
अनुहारमा चमक पाउनको लागि हामी महँगा क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। तर हामी आफैँले थोरै दिमाग लगाउने हो भने घरेलु उपायहरु अपनाएर पनि अनुहार गोरो बनाउन सकिन्छ। अनुहार तथा छाला गोरो बनाउन निम्न १० घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिन्छः
४) घ्युकुमारीको लेदोः यसलाई अनुहार र घाँटीमा ३० मिनेट लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको छालालाई गोरो, सफा र नरम बनाउने छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
१०) पानीको धेरै प्रयोगः पानीले शरीरबाट गन्धलाई बाहिर निकाली अनुहारको छालालाई तन्काई चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्दछ । तपाईंलाई दिनमा ८ घण्टाको निद्रा लिनु जरुरी छ । यसले आँखाको तलको भागको डार्क सर्कल हटाउँछ । साथै प्राकृतिक रुपमा चमक आउँछ र छाला गोरो देखिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,